3 Kutora kubva muZororo ra2015 Kubatsira Iwe muna 2016 | Martech Zone
3 Kutora kubva muZororo ra2015 Kubatsira Iwe muna2016
Chipiri, February 9, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Splender yakaongorora pamusoro pemamirioni mana ekutengesa pamasaiti mazana masere + kuti uone mashopu epamhepo mu2015 achienzaniswa na2014. Zuva rekutenda raive zuva rechitatu repamusoro rekutenga pamhepo mwaka nemacomputer nemagetsi zvichitungamira munzira pazvipo asi zvipfeko uye zvinhu zvinotungamira munzira yekukura. Cyber ​​Muvhuro ichiri chikuru zuva rekutenga pazororo online, iine 6% yekutengesa kwezororo. Nekudaro, kutengesa kwaive pasi 14% kubvira 2014.
Mune mawonero angu, pane mashoma anotora pano:
Kuronga - vatengi vari kuparadzira maitiro avo ekutenga uye vanogona kunge vasiri kutsvaga kumira mumutsara paChishanu Chishanu kune madhiri Vatengesi uye e-commerce saiti vanofanirwa kutarisa kutambanudza zvipo zvavo pamusoro pemwaka unoitisa Kisimusi.
Kurongeka - Kubatanidza kutengesa kwepamhepo nekutengesa, kutumira, mapikicha uye kudzoka kwemwaka wezororo kunogona kutyaira kwakawanda kutengesa kwepamhepo kana mapikicha ezvitoro. Kana vatengi vachiziva kuti zviri nyore uye vanogona kuvimba nenguva yekuendesa, ivo vanozotenga. Makore aya kugumburwa neFedEx anogona kunge akakuvadza kuvimba ikoko.
Marketing - zvese izvi zviri kuzoda kushambadza kwakasimba muna 2016. Panzvimbo pekutarisa kubhombiwa kwemabhurocha nemaflaya ekutengesa, ndinotenda vatengesi vakuru vanobatsira vatengi vavo uye tarisiro yekuronga mwaka, kuwana akanakisa madhiri, kuvabatsira kuronga kuripa, uye chengetedza kuendesa kwavo panguva.
Vatengesi vanofanirwa kufanoronga vane yakawanda yenguva uye nzvimbo yeagility inoenda mumwaka. Kana iwe usina zano pakupera kwezhizha kuti uchaita sei kusiyanisa yako yezororo kutenga kubva kune vako vanokwikwidza, unogona kunge wakanonoka kumutambo. Chinangwa chako nhasi inofanirwa kunge iri yekuenderera kuwana vanyoreri uye kurodha pasi maapp kuitira kuti uve nevateereri vakawanda vekutengesa kune iyo nguva kana mwaka watanga. Pakazosvika Chivabvu, unofanirwa kunge uine zano munzvimbo yemwaka.
Iyi infographic yakapihwa na Splender, ivo mukurumbira mupi yekambani-yakavakirwa pakutengesa zvirongwa muUS.
Tags: 2014 maringe 20152015Kisimusicyber mondayzororo infographiczororo zvekutenga maitirozororo maitirosplenderzvokuvonga
MainWP: Pakati Pakati Chengetedza Yako WordPress Sites
Yoast SEO: Canonical URLs pane Saiti ine Sarudzo SSL